Vaovao - Fampidirana fohifohy ny lafaoro sokay mitsangana
Ny vatosokay sy saribao dia ampidirina ao anaty fitoeram-bokatra amin'ny alàlan'ny forklift. Ny faritra ambany amin'ny fitoeram-pako dia misy hopper milanja mandeha ho azy. Rehefa avy milanja araka ny habetsaky ny solosaina dia afangaro ny vatosokay sy ny arina. Ny fitaovana mifangaro dia nakarin'ny fiara mitsivalana amin'ny alàlan'ny tetezana mirona mankany an-tampon'ny lafaoro sokay, ary avy eo atsipy ao anaty lafaoro amin'ny alàlan'ny fitaovana enta-mavesatra sy ireo fitaovana fahanana.
Ny akora fototra dia midina eo ambanin'ny asan'ny gravité-ny ao anaty lafaoro. Eo amin'ny farany ambanin'ny lafaoro, misy mpitsoka fakan-drivotra mampangatsiaka ny sokay eo am-pototry ny lafaoro. Ny rivotra avy any ambany dia mifanakalo hafanana amin'ny sokay ary miditra amin'ny faritra fanaovana kajy ho solika aorian'ny hahatratra 600 degre ny mari-pana.
Ny Limestone avy any an-tampon'ny lafaoro dia mandalo ny faritra mialoha ny hafanana, ny faritra fanaovana kajy, ary ny faritra mangatsiaka, ary ny fihenan'ny simika feno eo ambanin'ny fihetsiky ny mari-pana avo lenta mba ho simba ho lasa calcium calcium (sokay). Aorian'izany dia avoaka avy eo ambanin'ny lafaoro amin'ny alàlan'ny milina fanesorana kapila sy ny fitaovana fanariana lavenona miaraka amin'ny fiasan'ny fanidiana mihidy, mba hahatsapany ny famoahana ny rivotra tsy mijanona.
Vitao indrindra ny tambiny mandoa mandeha ho azy sy ny fanaraha-maso ny fizotran'ny fampifangaroana, ny fanaovana kalsina amin'ny lafaoro ary ny famoahana sokay.
(1) Ny rafitra mandeha ho azy sy ny tanana dia samy manana fitaovana. Afa-tsy ny fiasan'ny tanana amin'ny boaty fandidiana eo an-toerana, izy rehetra dia azo fehezin'ny fiasan'ny solosaina ao amin'ny efitrano fanaraha-maso afovoany.
(2) Ny tahirin-kevitry ny zavamaneno rehetra (toy ny fandrefesana, ny metatra mikoriana, ny fitaovana momba ny mari-pana) dia aseho amin'ny solosaina ary azon'ny mpanonta atao pirinty.
(3) Rafitra fikirakirana WINCC olombelona-masinina tonga lafatra.
(4) Rafitra fandrefesana sy fandanjalanjana ary onitra feno siemens feno.
(5) fandrefesana haavo an-jirony vita amin'ny tanimanga azo antoka, tompony marani-tsaina ary fitaovana enti-manana hafa.
(6) Rafitra fanaraha-maso fakan-tsary eo an-toerana tonga lafatra. Sary mivantana amin'ny fotoana tena izy sy angona angon-drakitra fanaraha-maso afovoany, mahatakatra tsara ny rohy rehetra amin'ny tsipika famokarana.
(7) Rafitra Siemens PLC azo itokisana, rafitra inverter sy solosaina indostrialy rafitra haitao mikrokomputer roa ambaratonga.
(8) Sariaka amin'ny tontolo iainana. Raha ny politikam-piarovana ny tontolo iainana sy ny filan'ny famokarana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny rafi-pitsaboana soot sy rafitra famotehana mba hahazoana famoahana ara-dalàna.
Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Famoronana Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma,